Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuzvirotera kwevakadzi nevarume
Kuzvirotera kwevakadzi nevarume
Pane nyaya yokuti vanhu vakawanda chose vanozvirotera (kurota uchiisana noumwe munhu kusvika pakubudisa urume uri kuhope kana kuita Orgasm uri kuhope) Nyaya inoshamisa, zvikuru kuvanhukadzi ndeyokuti kurota uchiiswa nomurume kunokwanisa kunaka chose kupfuura kuiswa chaiko nomurume. Kutiwo varume kurota uchiisana nomukadzi kunokwanisa kunakawo chose.
Kurota kwevanhukadzi hakuwanzi kutaugwa nezvako asi zvinoonekwa sokuti chikonzero ndechokuti varume vanobudisa urume pakuzvirotera asi vakadzi hapana chavanobudisa saka zvoita sokuti havana kuzvirotera asi kurota kwavo kwakangofanana nekwavarume. Kungosiyana pakuti hapana chinobuda chinoonekwa.
Vashoma vanhu vanosvika makore gumi nemashanu asina kumbozvirotera, zvisinei kuti mukomana here kana kuti musikana. Kana wazoti kurei, ukangoita nguva usina kumbozvibatsira nemaoko kana kuvata noumwe munhu, unotangazve kuzvirotera nokuti muviri wako unenge uchishanda panyaya dzokugadzira vana saka unoda kuti zvinhu zvifambe.
Ngationgorore maitikire azvo.
Mukomana anotanga kumira chombo achiri mudumbu ramai vake. Munozoona zve ka rusvava kakada kuita weti anokwanisa kumira chombo futi. Zvinomisa chombo zvinonetsa kutsanangura asi vese vakomana nevarume vanomira chombo kusvika chero makore akawanda muupenyu hwavo.
Murume kuti akwanise kupinza chombo mumukadzi chombo chinofanira kumira zvakasimba. Apinza anokwizirana nomukati memukadzi kusvika urume hwabuda, chombo chobva chadzokera pakuvata. Hino kana akarota achiisana nomukadzi. Chombo chinomira zvakangofanana, obva anatsorota achipinza mumukadzi nokushandisa chiuno kusvika urume hwatobuda ari kuhope kudaro. Pakubuda hunongobudira mumachira umomo ozozviona mangwana. Ndiko kuzvirotera ikoko. Kurota uchiisana nomukadzi zviri VIVID zvokusvika pakutobudisa urume usina kupepuka.
Mukadzi anofungigwa kuti anomirawo bhinzi kubva achiri mudumbu ramai. Mukadzi kana ari kuhope, anokwanisa kurota achiiswa nomurume. Asi kazhinji anorota maitikire azvo achiita zvaanoda iye kuti zviitike. Sokuti anoda kurezviwa sei pakutamba musina zvipfeko, kuti anoda kukiswa sei, kuti anoda kupurudzigwa sei. Anonakigwa chose chose nemaitikire azvo. Bhinzi inomira kuzasi kwese kunozvimbirira kusvika atovhurira murume wekuhope iyeye opinzwa chombo otochemerera ari kuhope kusvika atunda zvokuti akapepuka anopepuka muviri wakati rukutu sokuti anatsoiswa akasvinura.
Pamwe haatombopepuki asi mangwana paanomuka anoziva kuti akaiswa kuhope. Kana akapepuka anokwanisa kuwana gusvi rekunyorova. Kana ari mhandara anoziva zvaitika. Zvikuru kana achidhonza matinji. Kana ari mukadzi mukuru anohwisisa nokuda kwe EXPERIENCE.
Vanhukadzi verudzi gwedu havadi kurota vachiiswa. Zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri. Saka mazuvano vakawanda vava kuda kundotaurira mufundhisi kuti pane dhimoni riri kumunetsa usiku. Izvo bodo ari kungozvirotera ari kuhope. Ari kutoshuswa nokunaka kwazvo. Vafundhisiwo kufarira kureva nhema. Vashoma vafundhisi vanokuudza kuti dzokera kumba uvate zvakanaka hapana chakaipa uri kungorota uchiiswa chete chete. Hapana dhimoni. Ukaita nguva usina kumbovata nomurume, muviri unoziva kuti hauchina purakitizi saka unodzokera pakurota. Koitawo vamwe vanowanza kuzvirotera kupfuura vamwe. Hazvirevi kuti une dhimoni. Fungwa kuda kuvata nomurume hazvibvi pamadhimoni. Zvinongoreva kuti muviri wako unoda murume zuva nezuva.
Pakuzvirotera apa unokwanisa kuti kana pane mukomana/musikana waunoda pamoyo pako unokwanisa kumurota iye asi kazhinji unoona munhu asina kumeso zvokuti unongoona pamberi pake chete sokuti unobatabata chombo chake womuvhurira okupinza monakigwa asi usingaoni kuti ndiyani. Ingari yokuti fungwa yako iri pakuiswa chete kwete pakuda kuziva kuti ndiyani.
Zvimwezvo kuvarume, unokwanisa kurota munhu wauri kuda pamoyo kana kuti kungorota uchiona chitubu chomukadzi nokupinza chombo asi usingaoni kuti muridzi ndiani.
Kuzvirotera kunowanzotangira pazera rinotanga muviri kuenda kumwedzi kana kukura mabhora evakomana. Zvinoitwa nomuviri kupurakitiza panyaya yokuzogadzira vana. Kuvakomana muviri unotanga kugadzira urume nokutesita kuti urume hunozofamba sei hwava kuenda kumukadzi saka SYSTEM yese inotesitwa kuti iri kushanda zvakanaka here. Mukomana womira chombo wozvirotera urume hwobuda asi ari kuhope.
Pamazuva amwe chetewo mukomana anotanga kuita zemo otangazve kushandisa maoko kuzvibudisa urume. Zvichadaro kwemakore akawanda kusvika achembera. Kune varume vakawandisa vanozvinakira zvisinei kuti ane mukadzi mumba here. Koitazve vamwe vanofarira kuti mukadzi ashandise maoko ake pakutamba nechombo chomurume kusvika abuda urume. Hapana chakaipa. Ukadzidziswa nomurume kudaro unokwanisa kumubatsira kana uri kumwedzi.
Vasikanawo pavanotanga kuzvirotera muviri unodzidza kugadzirira kupinzwa chombo zvokuti zasi kunonyorova chose kana ane zemo. Zemo rinokwanisa kungoerekana rauya usingazivi kuti rabvepi. Unokwanisa kungonyorova zasi. Pamwe panguva dzimwe dzemwedzi kana dzezuva unowanza zemo.
Bhinzi inomira kuzasi kozvimba wotorota murume achikuisa zvinotonakidza chose. Hapana chakaipa pazviri. Zvinobatsira kugadzirira muviri kuzoiswa wava nomurume. Saka kufanotesta kuti zvinhu zvese zviri kushanda here? Kana pane chisingashandi kuwedzera ma HORMONE kuti chishande.
Bhinzi inotanga kumira nokuwedzera kukura
Magaro nechiuno zvinowedzera kukura
Mazamu anowedzera kukura
Chitubu chinotanga kunyorova zvokuti pamwe unonyorovesa bhurugwa
Unotanga kuenda kumwedzi nokukandira zai mwedzi umwe noumwe.
Pamwe unoita zemo zvokuti unozvibatabata zasi kusvika wazvipedza zemo nokutunda.
Kana wazoita murume unenge wava kuziva kuti chii chinokunakira wodzidzisa murume kuita maitire iwawo.
Nyaya yokutyiswa nokuzvirotera yakatanga kare. Ukatarisa kunyika dzakaita se Europe zvaionekwa sokuti munhukadzi anoti ari kuhope oita sokuti ari kuiswa zvainzi pane chaanacho chisina kunaka. pamwe aitonorapiswa. Saka kweduwo mazuvano, nokuda kwekusahwisisa maitikire emuviri wemunhu, zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri vava kuti idhimoni. Vafundhisi venhemawo vavako mazuvano ava vanoda zvokubhadhagwa mari nenyaya dzisina nebasa rese vobva vakasirawo kuwedzera kuti madhimoni kuti vapiwe mari.
Hapana chakaipa pazviri. Zvinongoreva kuti muviri wako uri kushanda zvakanaka uye uri mupenyu.
Asi hwisisa kuti kuvarume nevakadzi, ukagarovata nomurume/mukadzi wako zvakakodzera, kuzvirotera kunoita kushoma nokuti uri kuwana mukana wekubvisa zemo. Saka iwe chiona kuti mese mumba muri kuvatana zvakakodzerana nokuda kwenyu.
Posted by Mai E Chibwe at 14:31
Nyaya yokusvinira mwana mukaka